TENY SOA SAKAFO ALAHADY 28 OKTOBRA 2018 ALAHADY TSOTRA FAHA-30 | FKMP
TENY SOA SAKAFO ALAHADY 28 OKTOBRA 2018 ALAHADY TSOTRA FAHA-30
Tamin’izany andro izany, i Jesoa sy ny mpianany, dia tonga tao Jerikô, ary nipetraka nangataka teo amoron-dalana kosa i Bartime jamba zanak’i Time. Nony reny fa hoe i Jesoa Nazareanina izany, dia rafitra niantso izy nanao hoe: “Ry Jesoa Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko”. Ary maro no nandrahona azy mafy mba hampangina azy, fa vao mainka niantso mafimafy kokoa izy nanao hoe: “Ry zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko”. Dia nijanona i Jesoa, ka nampiantso azy. Ary nantsoin’ny olona izy sy nilazany hoe: “Matokia!mitsangàna, fa antsoiny ianao”. Dia nariany ny lambany, ka niezaka nanatona an’i Jesoa izy. Ary hoy i Jesoa taminy: “Inona no tianao hataoko aminao?” Dia hoy ilay jamba: “Rabony ô, aoka mba hahiratra aho”. Ary hoy i Jesoa: “Mandehana, fa ny finoanao no nahavonjy anao”. Dia nahiratra niaraka tamin’izay izy, ka nanaraka Azy teny an-dalana.
Ny finoanao no nahavonjy anao hoy Jesoa. Ny vavaka asandratra am-pinoana, am-panetren-tena, am-pitiavana dia tena mandaitra ary misy akony amin’ny fiainan’ny mpino. Koa na misy aza ny sakantsakana isankarazany noho ny zava-misy iainantsika na eo amin’ny fiaraha-monina izany na amin’ny fiainana andavanandro dia matokia fa tia antsika Andriamanitra, mihaino vavaka izy ary mangoraka sy mamindra fo antsika mandrakariva. Mahery ny vavaka koa manàna finoana amin’ny fiainana.
Previous Post: TENY SOA SAKAFO ALAHADY 21 OKTOBRA 2018 – ALAHADY TSOTRA FAHA- 29
Next Post: TENY SOA SAKAFO 01 NOVAMBRA 2018 FETIN’NY OLOMASINA REHETRA